Ra?iisul W. Soomaaliya ayaa maanta ka qaybgalay kulan ay kasoo qabygaleen boqlaal dhalinyaro ah. – Radio Daljir
Luulyo 30, 2012 12:44 g 0
Muqdisho, July 30 – Ra?iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada? ayaa maanta ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabisay Hay?ada CRD, kulankas oo looga hadalyey doorka Dhalinyaradu ku leedahay horumarinta Bulshada.
Ugu danbayntii Ra?iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli ayaa sheegay in Dhalinyarada looga fadhiyo iney ku dadaalaan waxbarashada taas oo ah mida kaliya oo lagu hormarin karo bulshada. sidoo kale Ra?iisul wasaaraha ayaa u sheegay Dhalinyarada inay yihiin madaxdii barito sidaas daraadeedna ay meel uga soo wada jeestaan sidii loo hormarin lahaa dalka.